Itori mhosva iyoyo: EMA | Kwayedza
Itori mhosva iyoyo: EMA
08 Nov, 2019 - 00:11	 2019-11-07T13:41:03+00:00 2019-11-08T00:00:58+00:00 0 Views
SANGANO rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda, reEnvironmental Management Agency (EMA), rinoti kurasira tsvina kana marara pose-pose imhosva huru inoendesa munhu kujeri kana kubvisiswa faindi.
VaGilbert Mugunzva, avo vanova environmental officer kuEMA, vanoti mutemo hautendere kuraswa kwemarara kana tsvina pose-pose.
“Mutemo weEnvironmental Management Act (Chapter 20:27) – uyo wakadzikwa mugore ra2002 – unorambidza kusvibiswa kwenharaunda nemarara, kuparadzwa kwenharaunda kuburikidza nekutemwa kwemiti, kana mhepo yakasviba inobva mudzimotokari kana mumaindasitiri.
“Vose vanobatwa vachipara mhosva idzi vanosungwa. EMA iri kuramba ichiita kurudziro dzekudzivirira kusvibiswa kwenharaunda mushure mekuona kuti idambudziko guru, kunyanya mumaguta,” vanodaro.
Mugore ra2017, vamwe veshandi vekanzuru yeChitungwiza vakaigochera pautsi apo vakanodhirena tsvina yesuweji pane imwe imba, kwava kunoidira munharaunda inogara veruzhinji kuUnit O, ikoko kuChitungwiza, zvikaita kuti vasungiswe.
EMA yakavabvisisa faindi ye$1 000 pamhosva iyi.
Zvichakadai, VaRogman Muchengapadare, vanova murongi kusangano rinorwisa kuraswa kwemapamper pose-pose reNational Action on Used Diapers (NAPUD), vanoti dambudziko iri rakurisisa muZimbabwe uye riri kukanganisa nharaunda nemamiriro ekunze.
“Kuraswa kwetsvina yemapamper pose-pose idambudziko guru muZimbabwe nekuti mvura painonaya anoyeredzwa oenda kunzizi dzinotipa mvura yekunwa. Anovhara madhireni anofambisa mvura zvichizopa mitoro kumakanzuru.
“Mapamper ane mishonga yejel iyo inoti kana ikapinda muvhu inokanganisa kuchena kwemvura neutano hwevanhu. Mishonga iyoyo inokanganisa zvakare mamiriro ekunze, ndiko kusaka tichisangana nekupisa kwakanyanya kana kutonhora kwakanyanyisa.
“Zvava kuda mushandirapamwe weHurumende neveruzhinji kuti patsvagwe nzira dzekuti tsvina yemapamper ingachengetedzwa sei,” vanodaro.
Pasi rose, dambudziko rekuitira tsvina pose-pose riri kuedza kurwiswa pasi pezvinangwa zvine donzvo rezvisungo zveSustainable Development Goals panozosvika gore ra2030.